‘I-ANC iziphilela emhlabeni wayo yodwa’ | News24
‘I-ANC iziphilela emhlabeni wayo yodwa’
Johannesburg – I-African National Congress iziphilela kowayo yodwa umhlaba futhi ayikuhloniphi ukubaluleka kokuba yimfihlo kokuvota esithe mayelana nokungamethembi uMengameli Jacob Zuma, kusho lowo owayenguNgqongqoshe wezobuNhloli uRonnie Kasrils ngoLwesine.
“Kuyihlazo elikhulu ukungasihloniphi kwabo lesi sinqumo sokuvota ngokuyimfihlo," kusho uKasrils etshela iNews24.
UKasrils ubekhuluma ese-University of Witwatersrand, eBraamfontein.
"Uma usuphumela obala ngokuvotela ukuthi uZuma akhishwe esikhundleni uthathwa njengomuntu obukela phansi ivoti eliyimfihlo nokuthi lokho kubathinta kanjani abanye abantu,” esho.
Ngesonto eledlule, uNobhala Jikelele we-African National Congress uGwede Mantashe uthe okungenani bathathu abangamalungu ePhalamende ku-ANC abazoqondiswa izigwegwe ngemuva kokuphumela esidlangalaleni bathi bavotele ukuthi uZuma aketulwe ngesikhathi kuvotwa ngokuyimfihlo ePhalamende.
OLUNYE UDABA: I-ANC izoqondisa izigwegwe amaLungu ePhalamende avotele ‘ukuketula’ uZuma
Lowo owayenguNgqongqohe wezeziMali uPravin Gordhan, owayengowezokuVakasha uDerek Hanekom kanye nabangamalungu aphezulu e-ANC ePhalamende uMakhosi Khoza noMondli Gungubele kulindeleke ukuthi baqondiswe izigwegwe ngokuphumela obala bathi bazovota ngonembeza babo.
UKasrils ukhulume wancoma uHanekom, uKhoza noGordhan ngokwenza into efanele “nelungile ukulungisa okungahambi kahle ngaphakathi eqenjini”.
“Lo ngumbono engingaziyamanisa nawo; ngathatha indlela efanayo nami ngo-2014 ngesikhathi ngizama ukunyakaziza i-ANC ngoba ngibona ukuthi iphila emhlabeni wayo yodwa.”
UKasrils wamangaza abaningi ngesikhathi ethi ngeke ayivotele i-ANC okhethweni luka-2014 ngesikhathi esungula umkhankaso i"Vote No".